Apple inondipa 0 euros kuti ndichinje Apple Watch Series 0 | Ndinobva mac
[Yakagadziridzwa] Vanondipa € 60 kwaive kukanganisa mumubvunzo wekupedzisira nezvezvinwiwa zvakagadziriswa newaanoshanda naye kubva muTeregiramu chat yeiyo Podcastapplesaka ndatenda uye regererai nyonganiso pamagumo epositi mufananidzo unozviratidza. Mubvunzo unenge kure kure uye uye apo iyo Apple Watch isina dambudziko remvura, pindura HERE.
Tinobvumirana kuti Apple Watch Series 0 ndiyo inononoka, yechinyakare uye pamwe ine simba kushoma pane ese ekutanga zvigadzirwa (pazuva rekuvhurwa kwayo) iyo Apple yakaparura kwemakore, asi ndokusaka vachigona kukuudza kuti Kana iwe unoda kuchinja wachi kune imwe nyowani, woidzokorora uye kanganwa nezvayo, izvo havazokupe euro imwe chete kuti iwe utenge Apple Watch nyowani.
Hatigone kuti iyi Series 0 yandiinayo pachiuno changu inoshanda izvozvi haichashandi, kunyange gore rino futi isu tichagara kunze kweinotevera watchOS 5 vhezheni kuti iburitswe munaGunyana.
Chido ndechekuti chirevo chekuti ivo vanotisiya kana mhedzisiro yaonekwa pavanopinda data rese rewachi kuitira kuti varichengete uye isu tiwane imwe mari yemhando nyowani:
Nehurombo, zvichibva pamhedzisiro yekuongorora kwedu, hatikwanise kukupa mari yechinhu chako. Nekudaro, isu tinokupa iwe mukana wekuti uzvishandise zvakare zvine mutsigo uye mahara.
Nekuuya kweApple Watch Series 4 gore rino, vazhinji vedu tiri kufunga nezvekuchinja iyo "yekare" asi inoshanda Series 0, asi chokwadika, iwe unofanirwa kutsvaga mari yekugadzirisa iyo angangoita 400 euros iyo modhi nyowani inodhura uye mune iyi Apple haisi kuzotibatsira.
Muchidimbu, chinhu chakanakisa kana uine imwe yemawachi aya uye uchida kuichinjira iyo yemhando nyowani yavanotanga munaGunyana, ndeyekuti unoipa hama kana kuitengesa kunze kwe Apple IpaBack, inova ndiyo nzvimbo inopenya sirogani: «Tengesa mune yako inoshanda kadhi yeApple Chitoro Kadhi Kadhi. Uye kana isisina kukosha, tinoidzokorora mahara. Hazvina mhosva kuti ndeipi modhi kana mamiriro ari mairi: iwe nenyika muchakunda »
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inondipa 0 euros yekuchinja iyo Apple Watch Series 0
Izvi zvinonditsamwisa zvakanyanya, ava vanhu vemaapuro, regai tione kana tikazoziva, havana basa nekuti ndiani asara kumashure. Izvo zvakakosha kwavari kutengesa. Nekudaro, ini ndinochengeta iyo yekare wachi uye kana ndikachinja rimwe zuva, haizove Apple Watch nekuti mumakore maviri kana matatu ichave yapera. Kushaya simba kwakadii!
Havasi kupenga, vakangwara uye isu tiri mapenzi kwazvo, iyi ndiyo tsika yaApple.
Maitiro ekuratidza mashandiro atakaita nekaturikirini pachiratidziri